PSJTV | लोकमान चोर भए हाम्रा ‘नेता’ के?
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७३ राजेश मिश्र
नेपालको निजामति सेवामा हुकुम प्रमांगीको बलमा सोझै अधिकृत स्तरमा जागीर खाने न भूतो न भविष्यति यीनै हुन्, लोकमान सिंह कार्की। उनका बाबु पंचायतकालमा शक्तिशाली थिए। उनको पहुँच दरवारमा सम्म थियो। लरतरो थिएन। उनी एकदिन सिधै राजा बीरेंद्रसंग गुहार माग्न पुगे। "सरकार मेरो छोरो बिग्रिन लाग्यो। यसलाई कतै अल्झाउनूपर्यो।" सुनसरी इनर्वा चोकको पश्चिम तिर लोकमानका बाबु भूपालमानको बर्गेलती मौजा थियो। आफ्नो जग्गामा बाली लागेको हेर्न भूपालमान आफैं नभ्याउने। उनी आफ्ना हली-खेतालाका नाईकेलाई घोडा दिएर पठाउँथे। सुनसरी जिल्ला मधेशमा पर्छ। लोकमानका "हर्वाहा-चर्वाहा" सबै मधेशी थिए। दलीत-गलीत अनि सिमान्तिकृत मदेशी समुदायका टाउकोमा गीर खेल्ने उनी त्यहाँ "मालिक" थिए।
पंचायतकालभर लोकमानले निजामति प्रशासनको सामान्य ज्ञान सिके। ०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोईरालाको शासनकालमा उनले भ्रष्टाचारमा स्नातक मात्र गरेनन, नेताहरुलाई चुनाव लड्न आवश्यक पैसाको लोभ देखाएर महेश आचार्य जस्ता सिकारु अर्थ राज्य मन्त्रीलाई "पार्टीका लागि" कोष खडा गर्न बाटो देखाए।
लोकमान आफुले रोजेका थारु अनि मुसहर केटीहरुलाई 'उठाउन' लगाउँथे। ती गरीब परिवारका कसैले पनि पंचायतकालमा 'मालिक' बिरुद्द उजुरी दिने सामर्थ्य थिएन। त्यो यसकारण कि, प्रहरी बिकेको थियो। गाउँमा ईज्जत टिकाउन भुपालमानले बिन्ती गरेर लगाएको जागिर खान लोकमान राजधानी आए। राजधानी उनकोलागि नयाँ कुरा थिएन। उनी यहाँ पनि टोले गुण्डाहरुसंग कुटीखाने डरले सुनसरी भाग्ने गरेको कुरा मैतीदेवी, डिल्लीबजार र बानेश्वरका पुराना "फ़ाईटर" हरुलाई थाहा छ। उनको ज्यान ठुलो थियो। तर मैतीदेवीका ज्यपूहरुले उनलाई तीनतिर घेरेर नोलले हानेपछि उनी घोवीखोलामा हामफालेर बानेश्वर कुलेलाम ठोकेको सम्झिनेहरु ज्युँदै छन्। पंचायतकालभर लोकमानले निजामति प्रशासनको सामान्य ज्ञान सिके। ०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोईरालाको शासनकालमा उनले भ्रष्टाचारमा स्नातक मात्र गरेनन, नेताहरुलाई चुनाव लड्न आवश्यक पैसाको लोभ देखाएर महेश आचार्य जस्ता सिकारु अर्थ राज्य मन्त्रीलाई "पार्टीका लागि" कोष खडा गर्न बाटो देखाए। गिरिजा प्रसाद दंग परे। लोकमान आफ़्फ़ुले चाहेको ठाउँमा नियुक्ति पाउने एक मात्र यस्ता कर्मचारी भए, जसको टाउको र पुच्छरको पहुँच कहाँसम्म छ, त्यसको कसैलाई भेऊ नै भएन। अथवा, तत्कालीन कांग्रेस सरकारले त्यसबारेमा वास्ता गरेन।
०४७ सालमा आन्दोलनले पंचायत ढालेपछि, गुप्तवासबाट निक्लिएका वामपन्थी नेता निलाम्बर आचार्यसंग केही विदेशी पत्रकारहरुको अन्तर्वार्ता गराउने चाँजो मलाई मिल्यो। आचार्यले त्यतिबेला भनेका कुरा अझै सम्झिन्छु, "अब हामीलाई सेनाको होईन, कर्मचारीतन्त्रको डर छ।" निलाम्बर आचार्य त्यसपछि मन्त्री भए। उनले कर्मचारीहरुलाई त्यतिबेला कसरी मुल्यांकन गरे, थाहा छैन। तर लोकमानको उदय त्यतिबेला नै भैसकेको थियो।
कहिल्यै केरा नदेखेको मान्छेलाई केरा र चिया एकैचोटी दियोभने उसले केरालाई चियामा छोपेर खान खोज्छ रे। कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई त्यसतै भएको हुनुपर्छ। १५ सालपछि ३३ बर्षमा गठित पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई ३६ र ७४ को मत विभाजनले परास्त गर्दै मध्यावधि चुनावको नाममा अस्थीरताको श्रीगणेश गर्ने त्यतिबेलाको दरवार र दरवारको चामल खाएर डकार्ने पुनरुत्थानवादी तत्व नै हो। दरवारले त्यतिबेला कांग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा मात्र होईन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि पुरापुर उपयोग गरेको हो। ०४७ सालमा आन्दोलनले पंचायत ढालेपछि, गुप्तवासबाट निक्लिएका वामपन्थी नेता निलाम्बर आचार्यसंग केही विदेशी पत्रकारहरुको अन्तर्वार्ता गराउने चाँजो मलाई मिल्यो। आचार्यले त्यतिबेला भनेका कुरा अझै सम्झिन्छु, "अब हामीलाई सेनाको होईन, कर्मचारीतन्त्रको डर छ।" निलाम्बर आचार्य त्यसपछि मन्त्री भए। उनले कर्मचारीहरुलाई त्यतिबेला कसरी मुल्यांकन गरे, थाहा छैन। तर लोकमानको उदय त्यतिबेला नै भैसकेको थियो।
भारतले जे गरोस, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमाथि चासो छैन। किनकी, नेपाली नेताहरुको वचनको कुनै मुल्य नै छैन। सत्तामा पुग्ने शर्तमा उनीहरु भारतको कुनैपनि शर्त मान्न आतूर हुन्छन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै औपचारिक घोषणा नै नगरी नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको घटना यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो।
नेपाली लोकतान्त्रिक भनौं वा गणतान्त्रिक आन्दोलन, सबै खालका आन्दोलनको जग कमजोर हुनेगरेको छ। नेपाली जनताले आन्दोलनलाई आत्मसात गर्नु अघिनै भारतीय स्वार्थले नेपाली आत्म निर्णयको अधिकारलाई अपहरण गरेको ईतिहास छ। नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न भारतले धक नामान्नुपरने दुईवटा कारण छन्। एउटा, नेपाली नेताहरु आफ्नो स्वार्थमा बिक्ने गर्छन। जनतालाई खुलेआम ढाँटछन्। अर्को, भारतले जे गरोस, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमाथि चासो छैन। किनकी, नेपाली नेताहरुको वचनको कुनै मुल्य नै छैन। सत्तामा पुग्ने शर्तमा उनीहरु भारतको कुनैपनि शर्त मान्न आतूर हुन्छन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै औपचारिक घोषणा नै नगरी नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको घटना यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो। त, यहाँ सन्दर्भ लोकमानको हो। लोकमानलाई बदलिएको गणतान्त्रिक परिवेश मान्य थिएन। ज्ञानेन्द्रको साता ढलेपछि गठित सरकारले उनलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त पनि गरेको हो। तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका ठुला नेताहरु कुन बाध्यताले लोकमानलाई नैनियुक्त गर्न बाध्य भए? सबैलाई लागेको थियो, लोकमान हाम्रो आफ्नै मान्छे हो।
प्रश्न अब यो हो, लोकमान दोषी भए नेपालका अहिलेका नेता कसरी निर्दोष हुन सक्छन? लोकमान पहिले नै अयोग्य साबित भएको भारत पोषित एउटा निमित्त नायक थियो। त्यसोभए, लोकमान लाई नियुक्त गर्नेहरु के थिए? को थिए? हिजो उनीहरुको के अवार्थ थियो? आज के छ? चोर त सबै हुन्। आज लोकमानको पालो आयो। अनि नेताहरुको कहिले?
भारतीय स्वार्थ संग देखावटी रुपमा नेपालीका सामु लुकामारी खेल्ने प्रचण्डलाई लागेको हुनुपर्छ, "मैले समर्थन गरेको लोकमानले कांग्रेस अनि एमालेलाई सिध्याउनेछ। कांग्रेसलाई लागेको थियो होला, लोकमान भारतको रोजाई हो, उसलाई समर्थन गरे म भारतको आशिर्वादले अजम्बरी हुनेछु। कांग्रेस भन्दा एमालेको स्वार्थ पनि त्यति भिन्न थिएन। तर लोकमान कसैका भैदिएनन। उनी भारतीय ईशारामा नयाँ नेपालको पद्दतिलाई बद्नाम गर्न मात्र लागेनन, आफ्नो स्वार्थको दूनो सोझ्याउन संबिधान माथि टेकेर डमरु बजाउन थाले। प्रश्न अब यो हो, लोकमान दोषी भए नेपालका अहिलेका नेता कसरी निर्दोष हुन सक्छन? लोकमान पहिले नै अयोग्य साबित भएको भारत पोषित एउटा निमित्त नायक थियो। त्यसोभए, लोकमान लाई नियुक्त गर्नेहरु के थिए? को थिए? हिजो उनीहरुको के अवार्थ थियो? आज के छ? चोर त सबै हुन्। आज लोकमानको पालो आयो। अनि नेताहरुको कहिले?
जापानी भाषा परीक्षा भोलिदेखि, हजार जनाले मात्रै दिन पाउने